मुटुको दौड भएको कसैले कसरी खानु पर्छ? - Ne gerekir?
मुटुको दौड भएको मानिसलाई कसरी खुवाउनु पर्छ?
समाधान गरियो5.01K हेराईहरू 04 / 06 / 2021 स्वास्थ्य
नुरटेन आर्गिन26 31 / 05 / 2021
नमस्कार मलाई भर्खरै हृदयघात भयो। तपाईं मलाई कसरी खुवाउन सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
Ne Gerekir सबै भन्दा राम्रो उत्तर छनौट गरियो 04 / 06 / 2021
डा। Dilan Çöçelli45 04/06/2021 प्रकाशित भयो
सर्वप्रथम, चाँडै स्वस्थ हुनुहोस्।
हृदयघात हृदयको, र यो सम्भव छ मृत्युमा परिणामस्वरूप।
कोरोनरी धमनी: तपाईं यो महाधमनीको पहिलो शाखा को रूप मा सोच्न सक्नुहुन्छ, सबै भन्दा ठूलो पोत कि मुटु बाट रगत सम्पूर्ण शरीरमा वितरण गर्दछ।
यो महत्वपूर्ण छ कि हृदयले संकटको पछि कति चाँडो हस्तक्षेप गर्दछ, मुटुमा रुकावटको आकार, यसको क्षति र हृदयमा यो अवरोधले कति असर गर्दछ। यस प्रक्रिया पछि, यो एक जीवनशैली परिवर्तन गर्न उपयोगी हुनेछ। तपाईले आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ र उनको सिफारिसहरु अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ।
तपाईं हतार गर्नुहुन्न। तपाईंले आफ्नो हृदय, आत्मा र शरीरलाई आराम गर्न समय दिनुपर्दछ। तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्न नबिर्सि जब नियमित गतिविधिहरुमा फर्कने हो, कसरी मुटुमा पर्ने भार लाई कम गर्ने, तपाईलाई रोजगार परिवर्तन गर्नु पर्छ कि हुँदैन, र अरु कुनै प्रश्नहरु जुन अचानक उत्पन्न हुन सक्छ।
हार्ट अट्याक पछि मुद्दाहरू छलफल गर्न छोडियो भने, फेरि हृदयघात हुन अति सम्भव छ। किनभने एथरोस्क्लेरोसिस, जसले हृदयघातको कारण निम्त्याउँछ, जीवनभरको रोग हो।
हृदयघातको कारण के हुन सक्छ?
⚠️ आनुवंशिक प्रवृत्ति
Er उच्च रक्तचाप
Weight अधिक वजन
He अस्वस्थ आहार
जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनबाट हटाउनु हुँदैन, नयाँ हार्ट अट्याकको तपाईंको जोखिम जारी रहनेछ। दोहोरिनबाट बच्न यी कारकहरूलाई धेरै प्रभावकारी रूपमा उपचार गर्न आवश्यक छ। दोहोर्याइएको हार्ट अट्याक क्षतिग्रस्त मुटुको लागि अझ खतरनाक र घातक हुन सक्छ।
तपाईंले आफ्नो खाना परिवर्तन गर्नुपर्दछ
आहार परिवर्तनले दोस्रो हार्ट अट्याकको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Fruits अधिक फलफूल र तरकारीहरू
प्रति हप्ता ✔️ २ माछाको सर्वि।
✔️ छालाविहीन कुखुरा
✔️ पागल र फलहरू
Le सम्पूर्ण अनाज
Ol जैतुनको तेलले बनाएको खाना खपत
✔️ कम फ्याट डेअरी उत्पादनहरू
प्रति हप्ता56- per अण्डाहरू
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको प्लेट विभिन्न तरकारीहरूले भरिएको छ। क्यान्ड र फ्रिज तरकारीहरू र फलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ जबसम्म उनीहरूमा नुन र चिनी छैन।
के सामान्य रूपमा बेवास्ता गर्न
अधिक चिनी, नुन र अस्वास्थ्यकर बोसो खपत नगर्नुहोस्। तपाईंले स्याचुरेटेड फ्याट सीमित गर्नुपर्दछ र आफैलाई ट्रान्स फ्याटबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।
Over अचाक्ली हुनु, आसीन हुनु
Fast सबै प्रकारको फास्ट फूड फूडहरू
❌ खाना जुन तलिइएको छ, यदि यो घरमा तयार छ भने
T नुन, चिनी
Ned क्यान्ड खाद्य पदार्थहरू जुन नुन वा चिनी हुन्छ
❌ स्नैक्सहरू जस्तै चिप्स, कुकिज, आइसक्रिम
Oz फ्रिज गरिएको भोजन
❌ पेस्ट्रीहरू र केकहरू
❌ केचअप, मेयोनेज
❌ मासु (सीमित)
❌ रक्सी, चुरोट
❌ हाइड्रोजनेटेड तरकारी तेल (ट्रान्स फ्याट्स)
माछाको दुई सर्वि प्रति हप्ता खानुपर्दछ। माछा मुटुको लागि उत्तम खाना हो, तर तपाईंले सही प्रकारहरू छान्नु पर्छ।
? सार्डिन माछा
यी सबै ओमेगा3मा समृद्ध माछा हुन्। यसलाई उत्तम मानिन्छ किनकि यसमा ओमेगा3फ्याट्टी एसिडहरू हुन्छ जसले कम कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ र संवहनी स्वास्थ्य सुधार गर्दछ।
तपाईंको दैनिक सोडियम सेवन १,1.500०० मिलीग्राम वा कम रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सीमित गर्नुहोस्।
सबै भन्दा लाभदायक पेय सधैं पानी हो। तपाईको डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाई चिया र कफी पिउन सक्नुहुन्छ। जेसुकै होस्, तपाईंले तिनीहरूलाई क्रीम, दुध पाउडर र चिनी थपे बिना पिउनु पर्दछ।
राम्रो पोषणको अतिरिक्त, नियमित व्यायामले हृदयको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंले राम्रो आराम गरेपछि, तपाईंले दैनिक कम्तिमा १ घण्टाको लागि हिड्ने, व्यायाम गर्ने र स्ट्रेच गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ, यदि ती भारी नहुन् भने।
धेरै तौलले मुटुमा अनावश्यक तनाव उत्पन्न गर्दछ। आहार र व्यायामले तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि, केहि केसहरूमा यो पर्याप्त छैन। अधिक तौल हिमशिलाको टुप्पो मात्र हुन सक्छ। तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्न को लागी कदम चाल्नु पर्छ तपाईले यसलाई डिल गर्नका लागि।
तनावको सामना गर्ने
तनावले नकारात्मक रूपमा तपाईको मुटुको स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ। ध्यान वा आत्म-नियन्त्रण प्रविधिको साथ तनाव कम गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
धूम्रपान छोड्ने र रक्सी सीमित गर्ने
रक्सीले रगत को पातलो पार्छ, त्यसैले यो शीतलतामा सेवन गर्नुपर्दछ यदि तपाईंलाई मुटुको अट्याक छ भने। धूम्रपानले तपाईको मुटुलाई बिगार्दैन, कि त। तपाईंलाई थाहा छ उहाँलाई छोड्नुपर्ने थुप्रै कारणहरू छन्।
स्वस्थ हृदयको लागि डाइटको प्रकार
यदि तपाइँ डाईटमा जाने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, पहिले तपाइँको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्। हरेक प्रकारको खाना तपाईको मुटुको लागि उपयुक्त हुँदैन।
एक छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँको तरकारीहरू, फलफूल र सम्पूर्ण अन्नहरू बढाउँदछ; कम फ्याट डेअरी उत्पादनहरू, कुखुरापाई, माछा, फलहरू, गैर-उष्णकटिबंधीय वनस्पति तेल र पागलहरू; मिठाई, मीठो पेय र रातो मासुको खपत सीमित गर्नुहोस्। स्वस्थ तौल कायम गर्न, शारीरिक गतिविधिसँग डाइड जोड्नुहोस् तपाईको जति क्यालोरी खपत गर्दछ।
AS DASH (फास्ट डाइट)
यो रक्तचाप कम गर्न डिजाइन गरिएको खाना हो। भूमध्य आहार जस्तै, यो पातली मासु र बोटमा आधारित फूडहरूमा केन्द्रित छ।
अन्य आहार देखि मुख्य फरक: DASH तपाइँको खाना मा सोडियम कम गर्न को लागी गरीएको छ।
के खपत गर्न सकिन्छ
‌✔️ पूर्ण अन्न
‌✔️ कम फ्याट वा कम फ्याट डेअरी उत्पादनहरू,
‌ ‌भरेजबल तेलहरू
ती खपत हुनेछैनन्
At ‌ फ्याट मासु
‌ atFat दुग्ध उत्पादन र नरिवल, मिति
‌ ‌ उष्णकटिबंधीय तेलहरू, जस्तै संसाधित फूडहरू
‌ ‌ साल्ट
➜ भूमध्य आहार
भूमध्य आहारले सीधा सोडियम खपत सीमित गर्दैन, तर प्राकृतिक रूपमा सोडियम खपत कम गर्न सक्दछ बोट खाना को ठूलो मात्रा को कारण।
यस खानाले स्वस्थ बोसो, जैतुनको तेल, फलफूल, माछा र अन्न, र विभिन्न ताजा तरकारी र फलहरूमा केन्द्रित छ। दुध र मासुका भाँडा माझ मात्र कहिलेकाँही खान सकिन्छ।
यदि तपाईंले डेरा उत्पादनहरूलाई तपाईंको आहारमा समावेश गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तिनीहरूसँग १% फ्याट वा कम हुनु पर्छ।
Nt बोटमा आधारित आहार
यस खानाले न्यूनतम मासु खपत सिर्जना गर्दछ। तिनीहरू फल र तरकारीहरू, अनाज, फलफूलमा आधारित छन्। कार्डियोवास्कुलर (हृदय र रक्त वाहिकाहरू) रोगका मानिसहरूलाई कम भिटामिन बी १२ सामग्रीको कारण सख्त शाकाहारी वा शाकाहारी भोजन पनि लिन सिफारिस गरिदैन। एक pescatarian (माछा भन्दा अन्य मासु खाने छैन व्यक्ति) वा सीमित मासु संग एक बोट-आधारित आहार ठीक छ।
अधिक बोटबिरुवा खानाहरू हृदय रोग, क्यान्सर, स्ट्रोक र टाइप २ मधुमेह को एक कम जोखिम प्रदान गर्दछ।
कम मासु खाने पनि मतलब कम स्याचुरेटेड फ्याट र कोलेस्ट्रॉल खपत।
Pesketarians भिटामिन बी १२, जिंक, क्याल्सियम, वा प्रोटीन को कमी को बिना मासु खान बन्द गर्दछ। समग्रमा, यो आहार भूमध्यसागरको आहार जस्तै छ। यो केवल एक मासु बाहिर। माछाको मासु यसले समुद्री खानामा तपाईंलाई चाहिने ओमेगा 12 फ्याट्टी एसिडहरूको स्रोत समावेश गर्दछ।
Resh ताजा पानी र मीठो पानीको माछा
Eds बीज र सूर्यमुखी बीज
✔️ सबै अन्नहरू
✔️ दुग्ध उत्पादनहरू
ती खपत हुन सक्दैनन्
Warm तातो रगत जनावरहरूको मासु
Food सफा खाना आहार
सफा खानु आफैमा आहार होइन, यो खाने बानी हो। सिद्धान्त भनेको सम्पूर्ण खाद्य पदार्थहरू खपत गर्नु हो जुन न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थहरू हुन्छन् ताकि खाने र टेबलमा कम रserv्ग र संरक्षक रहन सकून्। क्यान्ड र फ्रिजयुक्त खाना जसमा नुन र चिनी समावेश छैन यो नियमको अपवाद हो।
सफा खानाको नकारात्मक पक्ष भनेको तपाईलाई घरमा धेरै खाना पकाउनु पर्छ। रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूमा तपाईं एक गिलास मात्र पिउन सक्नुहुन्छ।
एक सफा-खानपान स्वचालित रूपमा नुन, चिनी, र संतृप्त बोसोको सेवन कम गर्दछ। यदि तपाइँ यस आहारमा रातो मासुको प्रतिबन्ध थप्नुहुन्छ भने यो मुटुको लागि साँच्चिकै राम्रो हो।
सुश्री नुरटेन, हामी फेरि हाम्रो शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। आशा छ तपाईं राम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ…
नुरटेन आर्गिन मा टिप्पणी गरियो 07 / 06 / 2021
धेरै धेरै धन्यवाद, मँ मेरो प्रश्नको यस्तो विस्तृत जवाफको आशा गर्दिन। मलाई पोषण को बारे मा प्रबुद्ध को लागी धेरै धेरै धन्यवाद।
सक्रिय 04 / 06 / 2021